Amasu Okuya Kwezinselelo Nezinselelo Zokumaketha Emaholidini ku-Post-Covid Era » Martech Zone
Isikhathi esikhethekile sonyaka sesiseduze kakhulu, isikhathi sonke esibheke phambili ekuphumuleni nabathandekayo bethu futhi okubaluleke kakhulu ukuzitika ngezinqwaba zokuthenga ngamaholide. Yize kungafani namaholide ajwayelekile, lo nyaka ume ngaphandle ngenxa yokuphazamiseka okusabalele kwe-COVID-19.
Ngenkathi umhlaba usalwa nobunzima bokubhekana nalokhu kungaqiniseki futhi ubuyela esimeni esejwayelekile, amasiko amaningi eholide azophinda abone ushintsho futhi angahle abukeke ehlukile kulo nyaka njengoba uhlangothi lwedijithali lokugubha la maholide lumukela umlingiswa omusha.
Amaholide Amakhulu Kuwo Wonke I-Globe
Source: Umhlahlandlela Wokumaketha Iholide le-MoEngage
Izinselelo Zokumaketha Eholide ngo-2020
Ku-2018, ukuthengiswa kwenkathi yamaholide ngokuthengisa kanye ne-e-commerce kweqe isigidigidi samadola maka okokuqala ngqa. Yize kulo nyaka ukuthengisa kungahle kuhamba kancane kepha ukuba necebo neziteshi ezifanele kungasiza imikhiqizo ukuthi iphushe imikhiqizo ngeziteshi zedijithali.
Ngenkathi use-US nase-Europe - Black Friday, Cyber ​​Monday, and Christmas & New Year Sale zithandwa kakhulu; eSouth East Asia naseNdiya - eDiwali, 11:11 [Ukuthengiswa Kosuku Lwabodwa] (Novemba), eHarbolnas (ngoDisemba), nakuBlack Friday kuphethe abathengi.
Ngokushintsha kwephethini yokusetshenziswa, okuthandwa ngumsebenzisi namandla wokuthenga jikelele wabathengi, imikhiqizo idinga ukuguqula amasu abo wokumaketha eholidini ukuze banelise izidingo ezintsha. Nazi ezinye zezinselelo ngenxa yobhadane olungavimba ukutholakala kokumaketha kwamaholide:
Abathengi bazi kakhulu ukubaluleka: Abathengi ikakhulukazi izinkulungwane zeminyaka bayishintshile imikhuba yabo yokusebenzisa imali futhi basukile kuziswiper baya ezinsizeni. Abathengi bazoqaphela kakhulu ukubaluleka futhi bangacabangi lapho bethenga.
Izinkinga zokulethwa kochungechunge lokuthengwa kwempahla: Ngokuvalwa kwemikhawulo kanye nemikhawulo yokuhamba emhlabeni wonke, ukwenziwa kwempahla yezimboni ezidayisa impahla kuye kwaba nzima kakhulu. Ngo-Ephreli, ukuthengiswa kwezitolo e-United States kwehle ngo-16.4% 3 ngenxa yezinkinga zokuthengwa kwempahla. Izinkinga ezinjengokushoda kwabasebenzi, imingcele yezokuthutha, nokuvalwa kwemingcele zengeze osizini lokulethwa isikhathi eside.
Ukwenqena ukuthenga esitoloAbantu bayaqapha futhi bakhethe kakhulu ngokuya esitolo. Ukuthengwa kwedijithali naku-inthanethi kuthathe ijubane. Ngisho nemikhiqizo iyawubona lo mkhuba futhi inikela ngezaphulelo ezisindayo zokuthenga eziku-inthanethi ukugcina ukuphepha kwabathengi engqondweni.
Bounce Emuva Amasu Eholide
Amaholide ngokuvamile azungeza imizwa nokuxhumana kwabantu. Amabhizinisi adinga ukungeza lezo zing ezengeziwe kumasu abo wokuxhumana ukwenza abathengi babambeke emikhiqizweni yabo. Ngokusho kwe- isifundo se-United Kingdom-based Institute of Practitioners in Advertising, imikhankaso enokuqukethwe okungokomzwelo okwenziwe kabili kanye naleyo enokuqukethwe okunengqondo kuphela (31% vs. 16%). Njengomakethi, uzodinga ukuqinisekisa ukuthi imikhankaso yakho igxile enjabulweni, kubumbano nasekugubheni. Nawa amasu ambalwa wemikhiqizo ongayisebenzisa:
Ukwanda kokuhambisana kokukhethwa kwe-curbside: Ukulethwa ngaphandle kokuxhumana kuyisihluthulelo; amakhasimende abheke phambili kumikhiqizo ethatha izinyathelo zokuphepha ezinhle ekugcineni ezakha nokwethembana. Ukulandwa kohlangothi lomgwaqo kuzoba kukhulu kule sizini samaholide ukugwema ukugijimela esitolo kanye nolayini abalindile.
Gxila ekumaketheni kweselula - Ngokuvumelana ne Ama-Adobe's I-2019 Holiday Recap, i-84% yokukhula kwe-e-commerce ebalwe ngesikhathi samaholide e-United States yenziwa ngama-smartphones. Ukuhlinzekwa okugxilwe ekugxilwe kukho nokunikezwa kwendawo kungakhuphula ukubandakanyeka kwemikhiqizo futhi ekugcineni ukuthengisa.
Ukuxhumana Okuzwela: Lokhu akulona icebo futhi okufanele ukwenze. Imikhiqizo idinga ukugxila kwimizwelo futhi igweme ukumaketha ebusweni futhi ibe nobuqili ngemiyalezo. Badinga ukuzwakalisa ubumbano nabathengi kulezi zikhathi ezinzima.
Gxila ku-Digitization: Ukwamukela iziteshi zedijithali kuyisinqumo esisobala kubathengisi. Ukuthengiswa okuthengiswa ku-inthanethi bekuphakeme ngoJuni uma kuqhathaniswa nesilinganiso sangaphambi kobhadane ngoFebhuwari.
Finyelela kubasebenzisi abaningi ngezaziso ze-Push ezenziwe ngezifiso: Umsebenzisi ojwayelekile uthola izaziso ezingaphezu kuka-65 ngosuku! Amabhizinisi kufanele alwe futhi akhuphule umdlalo wabo wesaziso se-push. Ungavumeli izaziso zakho zilahleke kuthreyi yesaziso, zivele ngezaziso ezicebile nezenzelwe umuntu okunzima ukuziphuthelwa.
Ukulungiselela isu lokumaketha kwamaselula kusengaphambili nokusebenzisa indlela ye-omnichannel kungasiza ukukhulisa ukuzibandakanya kakhulu futhi kunikeze izaphulelo ezinkulu namanani kubathengi. Ukwenza ngokwezifiso nokwenza ngezifiso kuzophumelela kakhulu kule sizini samaholide. Vumela injabulo yeholide iqale!
Landa Umhlahlandlela Wokumaketha Kweholide we-MoEngage
Tags: 11: 11I-christmasi-covid-19ukuthathwa kwe-curbsideukwenziwa kwedijithaliukuma komhlaba jikelelehabolnasumhlahlandlela wokumaketha weholideizinkathi zamaholideukumaketha amaselulaisu lokumaketha eselulamoengagei-post-covidsusa izazisotekutsengisaamaholide aseningizimu empumalanga ye-Asia